vendredi, 06 novembre 2020 16:00
Rova Manjakamiadana : Aza disoana ny tantara
Isaorana ny mpitondra izay nanarina sy nanamboatra ny Rova Manjakamiadana izay may, isaorana ihany koa ireo rehetra nanome tanana sy nanome vola anaovana izany. Vakoka Malagasy, ary Vakoka fantam-pirenena maro io Rova io. Ny tantara kosa no tokony hapetraka tsara.Rovan'ny fanjakana Merina ny Rova Manjakamiadana, fa tsy Rovan'ny fanjakana Malagasy, na tiana afohezina hoe Rovan'i Madagasikara.Rovan'i Malagasy izy, amin'ny maha vakoka iombonana azy, toa ireo Rova isaky ny Faritra, izay an'i mpanjaka sy ny foko misy isam-paritra. Hajaina, omena Hasina sy ny toerana tokony hisy azy avy tsirairay. Raha misy vakoka, na fanaka, na satroboninahitra ao anatiny, toa ity naverin'i Frantsay aty amintsika ny an'i Ranavalona III ity, izay mpanjaka teto Imerina, dia vakoka an'ny Malagasy rehetra, fa tsy "Fiandrianam-pirenena" akory.
mardi, 03 novembre 2020 15:41
Fantatrao ve : Ahoana ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina ?
Atao androany 03 novambra ny fifidianana izay ho filoha amerikanina. Hifaninana amin'izany ny filoha amperinasa Donald Trump, Repoblikanina, sy Joe Biden avy amin'ny antoko Demokraty. Amerika dia firenena manana rafitra federaly, izay ikambanan'ireo Etats fédérés miisa 50, izay voamarika kintana 50 amin'ny sainam-pirenena amerikanina. Miaraka lany izany ny Filoha amerikanina sy ny filoha lefitra iray miaraka aminy (Ticket). 1- Iza ireo mpifidy Mpifidy vaventy 538 no mifidy izay ho Filoham-pirenena amerikanina, izay mitovy isa amin'ireo mandrafitra ny Congrès, 435 représentants (toa ny solombavam-bahoaka) ary 100 senatera, miampy mpifidy vaventy 3 ho an'ny District de Columbia (Whashington DC).Izany hoe izay isan'ny représentant sy isan'ny senatera ao amin'ilay Etat no isan'ireo Mpifidy vaventy na Grand électeur fidiana ao amin'io Etat fédéré io.
lundi, 02 novembre 2020 08:10
Halatra taola-paty: Sera an-javony
Tsy mbola nahitana fanazavana mihitsy ity resaka halatra taola-paty ity. Betsaka anefa ny tranga, ary maro ihany koa ireo voasambotra, fa hatreto tsy hita ny ati-doha, na ireo mpividy izany. Raha ny fanadihadiana natao dia maro ireo tsaho manodidina ity resaka ity, ka mahatonga ny olona mino fa ho vola be io taolana io, ao ny milaza fa ny taolan-dava no tsara. Misy ny milaza fa ny vahiny any ivelany no mila azy io, anaovana fanafody, na akora fanatsarana tarehy, sy ny resaka maro hafa. Ny mahagaga anefa dia maro ireo taolana any amin'ireny firenena nahitana ady an-trano toa ny Rwanda, feno taolana tsy hita aza izay asiana azy, faty tsy fantatra tompo ka dia nasavovona tsy hita ariana, ary tsy misy mividy.
samedi, 31 octobre 2020 13:08
Fananan-drano : Firenena nosoavin’Andriamanitra i Madagasikara
Anisan’ny firenena manan-karena amin’ny lafiny fananan-drano i Madagasikara. Mahatratra 1 486 milimetatra ny fitambaran’ny taham-pihavian’orana isan-taona manerana ny nosy, raha tsy misy afa-tsy 912 milimetatra ny an’i Frantsa, ohatra, ary 211 ny an’i Maraoka, araka ny fanadihadihana iray nataon’ny Banky iraisam-pirenena. Mirotsaka eo anelanelan’ny volana novambra sy aprily ny 90 isan-jaton’ny ranon’orana eto amin’ny nosy.Mitotaly 14 186 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny fitambaran’ny rano ananan’i Madagasikara.Ety ambonin’ny tany ny 10 424 tapitrisa metatra toratelo amin’ireo, ary ao anaty tany ao kosa ny 3 630 tapitrisa metatra toratelo.
mercredi, 28 octobre 2020 08:32
Vanille: SOS SAVA
Tapaka ambozogno (tapa-tenda). Tsy misy teny hafa mahadika ny zava-misy aty amin'ny faritra SAVA (Sambava Antalaha Vohemar Andapa) ankehitriny, izay faritra foibe mpamokatra lavanila, vokatra 99% fanondrana any ivelany, satria ny varotra eto an-toerana dia vitsy dia vitsy noho ny tsy fisian'ny indostria mavesatra afaka manodina izany vokatra izany. Ny lavanila no anisan'ny mitana lohalaharana amin'ny fampidiram-bola vahiny eto Madagasikara, satria dia 280-350 dolara ankehitriny ny lavanila 1kg eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara ho fantatra fa lavanila maitso 5kg no ilaina, ampandalovina fampangotrahana sy hafanana, ary hamainina, mba ahazo lavanila azo aondrana 1kg. Raha ny tsena eto an-toerana dia manodidina ny 200 000ar eo ny kilaon'ny lavanila maitso, ary amidy 1 500 000ariary any amin'ny mpanangom-bokatra ny lavanila vita, raha mivarotra any amin'ny 2 000 000ariary ny kilao ireo mpambongady sy mpanondrana any ivelany.
Mety mahasoa anao: Ohatrinona ny karama amin'ny asa ataonao
Matetika misy tombam-bidin'ny asa na devis angatahana, misy ny fitadiavan'asa, dia mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe ohatrinona ny karaman'ny mpiasa manao ilay asa, na raha manao entretien dia anontaniana ny prétention na ny karama tadiavinao? Miankina amin'ilay fahasarotan'ny asa, ny andraikitra tazonina, ny isan'ny mpiasa eo ambany fiadidiana, ary ny fari-pahaizana matetika ny karama tokony takiana amin'ny famitana asa iray. Ny tsara ho fantatra dia misy elanelana avo 20 eny eo ny karama ambany indrindra sy ny karama tokony ho azon'ny Tompon'andraikitra lehibe indrindra amin'ny orinasa iray.
Maro ireo Orinasa nalain'ny fanjakana tamin'ireo tsy miankina, indrindra ireo teo ampelatanan'ny vahiny, fantatra tamin'iay hoe nationalisation. Misy ihany koa ireo najoro taty aoriana, ka nitondrana fanavaozana hatrany, ka nanomezana azy ireo fahaleovan-tena ara-pitantanana, fa nitazona petra-bola tao hatrany ny fanjakana, ary mbola manendry solon-tena hitantana ny Orinasa. Ireo Mpikambana ao anaty filankevim-pitantanana aza dia mbola didy avy amin'ny fanjakana no manendry azy, rehefa avy natolotr'ireo vondron'asa manana solon-tena ao. Vao miresaka orinasam-panjakana, dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny JIRAMA, ny Air Madagascar, ny Cnaps, ny Sirama, ny Secren sy ireo maro hafa.
samedi, 24 octobre 2020 13:52
Fantatrao ve: Inona no asan'ny Solombavam-bahoaka
Nezahina nofintinina izy ity, fa somary lava ihany. Ny Lalampanorenana no lalàna ambony indrindra eo amin'ny Firenena iray.Tamin'ny Desambra taona 2010 no nisy fanovana farany, ary mbola mihatra ankehitriny. Ny Savaranonandon'ny Lalampanorenana dia milaza mazava : " Ny fananganana Fanjakana tan-dalàna izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina samy ho voafehin'ny fitsipi-dalàna mitovy, eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana mahaleotena " Raha adika tsotra izany, dia miainga amin'ny Lalàna avokoa ny fitantanana ny firenena, na ny fifandraisan'ny samy rafi-panjakana, na ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny entina, na eo amin'ny samy Malagasy, izay misy ny Fitsarana mahaleotena manara-maso izany na mitsara ny mety tsy fanaraha-dalàna.
Matetika izay manongana ny Filoham-pirenena na ny fahefana Mpanatanteraka ihany no enjihina ho mpanongam-panjakana. Ny Lalampanorenana milaza mazava ireo Andrim-panjakana hiorenan'ny Fitondrana: "Andininy 40.- Ireto avy ny Andrim-panjakana :- ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta ;- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ;- ny Fitsarana Avo momba ny LalàmpanorenanaNy Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana." Ka izay miezaka manongana ny iray amin'ireo izany dia mpanogam-panjakana. Ny Mpitondra Mpanatanteraka ankehitriny dia hita mazava, ary nolazainy ampahabemaso fa hanafoana ny Antenimieran-doholona. Nanao letrezana tamin'izany izy, fa nosakanan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, izay manana adidy hiaro ny Andrim-panjakana.
mercredi, 21 octobre 2020 10:12
Sénat : Le projet de destitution de Rivo Rakotovao n’a pas fait long feu
Le Parlement de Madagascar est en pleine deuxième session ordinaire depuis mardi. Il s’agit de la dernière pour les sénateurs en exercice dont le mandat expirera en février 2021. Le projet de destitution du Sénat était l’un des faits ayant marqué la vie de cette institution cette année.Auguste Philippe Randrianandrasana, sénateur de Madagascar élu pour la province de Fianarantsoa, s’est levé pour diriger une fronde anti-Rakotovao à cette fin. Dès janvier, la faction a mené une intense campagne médiatique pour préparer l’opinion.Des soi-disant occurrences d’irrégularité ont été étalées au grand jour pour reprocher le bureau permanent de la Chambre haute du Parlement.